‘आधुनिक अनुसन्धानमूलक नर्सरी’ जहाँ पाइन्छ निःशुल्क फलफूल र जटिबुटीका बिरुवा
सोमबार, जेठ ३१ २०७८ ११:३९ AM
काठमाडौं । तपाईं आफ्नो घरको बगैंचामा फलफूल र जटिबुटीका बिरुवा रोप्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? वा बिरुवा नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ । यदि, त्यो सोचमा हुनुहुन्छ र बिरुवाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौंको कागेश्वरी नगरपालिकामा रहेको आधुनिक अनुसन्धानमूलक नर्सरीमा जानुस्, त्यहाँ फलफूल र जटिबुटीका बिरुवा निःशुल्क पाइन्छ ।
काठमाडौंभित्र हरियाली बनाउने सोचका साथ बिरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसार काठमाडौंद्वारा कागेश्वरी नगरपालिकामा सो नर्सरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ मा रहेको सो नर्सरी विगत २ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । सो नर्सरीले १ लाख ५० हजार बेर्ना उमार्न सक्ने क्षमताको छ । तर, अहिले १ लाख बिरुवा उत्पादनलाई लक्षित गरिएको वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झाले बताए । नर्सरी सञ्चालनको समय नतोकिएको समेत उनको भनाइ छ ।
नर्सरीमा महत्वपूर्ण तथा बहुउपयोगी मानिएका श्रीखण्ड, मयुरपंखी धुपी, अमला, अम्बा, हर्रो, लप्सी, सुन चाँप, विपिन्द्र फूल, कपुर, कल्की, भकन बेली (गेट फूल) गुर्जो, लालुपाते, मरिच, शिरिश, पारिजात तथा जाइफूल, बकाइनो, सुपारी पातलगायत बिरुवा छन् । नर्सरी नाइकेका रूपमा सिन्चमान शेर्पा र लाक्पा शेर्पा (श्रीमान्–श्रीमती) रहेका छन् ।
बीउ ल्याएर नर्सरीमा आफैंले बिरुवा उमार्ने गरेको सिन्चमानले बताए । उनका अनुसार सो नर्सरीमा १५ दिनदेखि ३/४ महिनासम्ममा उम्रने बिरुवा छन् । बेर्ना तयार गर्न दुई भाग माटो, एक–एक भाग बालुवा र कम्पोष्ट मल मिसाउनु पर्ने हुन्छ । दल राख्ने ठाउँलाई क्यारी भनिन्छ ।
उक्त नर्सरीको बिरुवा देशभर व्यक्ति वा समूह तथा सहकारीले आफ्नो इच्छाअनुसार लिएर जान सक्छन् । २५ वटाभन्दा कम बिरुवाका लागि आफ्नो नाम लेख्न, त्योभन्दा बढी ५० वटासम्म आफ्नो पूरा विवरण लेखेर मात्रै बिरुवा लिन सकिन्छ । त्यस्तै ५० भन्दा बढी बिरुवाका लागि भने स्थानीय तहको सिफारिस पत्र भएपछि दिने गरेको शाखा अधिकृत झाले बताए ।
‘बिरुवा लिन चाहनेलाई धेरै झन्जट नहोस् भनेर हामीले थोरै बिरुवा लान चाहनेका लागि प्रक्रियागत कुराहरू हटाएका छौं । ४/५ वटा बिरुवा लानिले आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्रै लग्ने हुँदा हेरचाह राम्रो गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनले भने, ‘हजारौं बिरुवा पनि दिन तयार छौं तर, नर्सरीबाट निःशुल्क लगेर अन्त बेच्ने सम्भावना तथा सदुपयोग नहुन सक्छ भनेर संख्याको आधारमा बिरुवा लानसक्ने नियम बनाएका हौं र धेरै बिरुवा लान इच्छुक व्यक्तिकाबारे हामीले विस्तृतमा बुझ्छौं ।’
कस्तो हावापानी तथा मौसममा कुन बिरुवा रोप्न उपयुक्त हुन्छ ? सोध्नेहरूका लागि नर्सरीले आवश्यक परामर्शसमेत दिने गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा एक चरणका बिरुवा वितरण भए पनि त्यसको प्रतिफल धेरै आइकेको छैन । साथै प्रचार–प्रसार पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा गत सालका केही बिरुवा अझै नर्सरीमा बाँकी छन् ।
सरकारले १५ लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त नर्सरी सञ्चालन गरेको हो । वन विभागको स्वामित्वमा धेरै नर्सरी भए पनि वन बीउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र, हात्तीसारअन्तर्गत हालसम्म ४ वटा नर्सरी छन् ।
त्यसमध्ये नेपालकै पहिलो नर्सरी काठमाडौंको कागेश्वरीमा रहेको नर्सरी हो । त्यस्तै नेपालगञ्जमा पनि हात्तीसार अन्तर्गकै नर्सरी छ भने, पोखरा तथा विराटनगरमा बीउ मात्रै वितरण हुने गरेको छ । विभिन्न महिला समूह, क्लब तथा सहकारीमार्फत बिरुवा लिन आउनेलाई विशेष प्राथमिकता र परामर्श दिने झाको भनाइ छ ।
बुधबार २६ जेठ २०७८ १२:०५ PM मा प्रकाशित
यसरी गर्नुस् कौसी खेती, घरकै छतमा थोरै लागतमा फलाउन सकिन्छ तरकारी र फलफूल